Nooca cusub ee Kdenlive 19.04 ayaa yimid oo kuwanu waa warkiisa | Laga soo bilaabo Linux
Dhawaan Nooca cusub ee tifaftiraha fiidiyowga ee Kdenlive 19.04 ayaa lagu sii daayay dhowr hagaajin iyo hagaajin. Kuwa ugu muhiimsan iyaga iyo marka loo eego Tow, markaa Kdenlive 19.04 cusub wuxuu yimaadaa qayb ka mid ah codsiyada KDE 4.19.
Kdenlive waa tifaftire fiidiyow oo bilaash ah oo furan loogu talagalay GNU / Linux iyo FreeBSD, kuwaas oo waxay taageertaa AVCHD, DV iyo HDV, waxayna ku tiirsan tahay dhowr mashruuc oo kale oo furan sida FFmpeg, qaabeynta fiidiyowga ee MLT, iyo saamaynta frei0r.
Sida kor ku xusan, Kdenlive wuxuu ku dhismaa qaab-dhismeedka fiidiyowga MLT iyo ffmpeg, kuwaas oo bixiya astaamo u gaar ah isku dhafka nooc kasta oo warbaahin ah.
Mashruuca waxaa bilaabay Jason Wood sanadkii 2002, maantana waxaa dayactiray koox yar oo horumariyayaal ah, iyadoo la siidaayay Kdenlive 15.04.0, wuxuu si rasmi ah uga mid noqday mashruuca rasmiga ah ee KDE.
Hadda, cusbooneysiin weyn oo loogu talagalay tifaftiraha fiidiyowga Kdenlive ayaa la heli karaa.
1 Wararka ugu muhiimsan ee Kdenlive 19.04
2 Sidee loo rakibaa Kdenlive 19.04 Linux?
2.1 Ku rakibida PPA (Ubuntu iyo derivatives)
2.2 Ku rakibida AppImage
Wararka ugu muhiimsan ee Kdenlive 19.04
Sii deynta cusub ee Kdenlive 19.04 dadka isticmaala waxay filan karaan horumarinno yaryar oo fara badan, kuwaas oo si gaar ah u fududeynaya la shaqeynta waqtiga, saamaynta, iyo tifaftiraha cinwaanka.
Jadwalka waqtiga ayaa hada kala soocaya raadadka maqalka iyo video. Isticmaalayaasha ayaa si shaqsi ah u cabbiri kara raadadka shakhsiga ah iyagoo isticmaalaya jiidis iyo dhibic.
Dhageysiga codka ayaa bixiya badhan si loo bilaabo duubista codka ee wadada u dhiganta.
Haddii loo baahdo, clips la soo xulay waxaa lagu dhaqaajin karaa kumbuyuutarkaama. Waraaqaha ku jira waqtiga ayaa lagu kala beddeli karaa inta u dhexeysa mashaariicda iyada oo la adeegsanayo nuqul iyo dhaji isla markaana (si ku meelgaar ah) loo wada demiyo.
Keyframes-ka waxaa lagu abuuray adigoo gujinaya laba jeer waxaana lagu dhaqaajin karaa jiirka. Qiimaha furaha furaha ayaa isbadala markii barta barroosinka lagu dhaqaajiyo khadka baandada.
Horumariyayaashu waxay dib u eegeen saamaynta "xawaaraha".
Isticmaalayaasha ayaa isku habeyn kara saamaynta ay doorbidaan ka dibna si dhakhso leh ayey u heli karaan. Dhibaatooyinka oo dhan oo aan si sax ah u shaqeyneynin waa inay ka yimaadaan guddiga.
Tifatiraha cinwaanku wuxuu bixiyaa hagitaanno la habeyn karo, asalka waxaa lagu beddeli karaa qaababka hubinta iyo midab cad ama madow.
Horumariyayaashu waxay hagaajiyeen maaraynta Mashruucyada Mashruucyada iyo kormeerayaasha (horudhac). Waxyaabaha kale, dadka isticmaala waxay soo bandhigi karaan hagitaanno kala duwan.
Kheyraadka, sida cinwaannada cinwaanada iyo astaamaha muujinta ayaa hadda lagala soo bixi karaa daaqadaha wada hadalka ee u dhigma.
Rendering waa qalab la dedejiyey oo leh hufnaan hufan. Labada hawloodba wali waxaa loo arkaa inay yihiin tijaabo.
Ugu dambeyntiina, barnaamijka tafatirka wuxuu ku socdaa mid deggan oo dhaqso badan, horumariyayaashuna waxay tirtireen cayayaanno badan. Macluumaad dheeraad ah ayaa la bixiyaa by ogeysiiska rasmiga ah.
Sidee loo rakibaa Kdenlive 19.04 Linux?
Kuwa xiiseynaya inay awoodaan inay ku rakibaan qaybtaan cusub ee Kdenlive 19.04 disto, Waa inaad raacdaa tilmaamaha aan kula wadaageyno xagga hoose.
El habka rakibo ugu horeysay codsigani wuxuu khuseeyaa ku dhowaad qaybinta Linux waa iyada oo loo marayo xirmooyinka Snap.
Shuruudda kaliya ayaa ah in distoorkaagu uu leeyahay taageero xirmooyinkaan.
Ku rakibidda Waxaad ku sameyn kartaa adoo furaya terminal isla markaana ku fulinaya amarka soo socda:
Ku rakibida PPA (Ubuntu iyo derivatives)
Qaab kale oo loogu rakibo barnaamijkan nidaamkaaga ayaa ah caawinta bakhaarka. Sidaa darteed qaabkani wuxuu ansax u yahay Ubuntu iyo waxyaabaha ka soo baxa.
Terminal-ka waxay ku fulinayaan amarrada soo socda:
Hadda waxay cusbooneysiin doonaan xirmooyinkooda iyo liisaska keydka iyagoo leh:
Ugu dambeyntii waxay rakibi doonaan arjiga iyagoo fulinaya amarka soo socda ee ku yaal terminal:
Ku rakibida AppImage
Ugu dambeyntii habka ugu dambeeya ee qaybinta Linux ee hadda jira ayaa soo degsanaya xirmada AppImage.
Gelinka waxaan ku fulin doonnaa amarka soo socda:
Waxaan ku siinaa rukhsad dil:
Ugu dambayntiina waxaad ku ordi kartaa dalabkaaga adigoo gujinaya laba jeer adoo ku riixaya ama boosteejada adigoo leh:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Nooca cusub ee Kdenlive 19.04 ayaa yimid oo kuwanu waa warkiisa
Aad u qurux badan tifaftiraha kaliya ee buuxa ayaa haray, oo leh muuqaal yar! OpenShot waa mid kale oo si gaar ah ufiican, inkasta oo inbadan oo nooca moviemaker-ka ah ... inbadan oo laga badbaadiyey KDE-da foosha xun, sii kordheysa ee foosha xun, gaabis ah oo aan si sax ah u dhexgelin codsiyada sidii markii horeba loola jiray konqueror.
Waxaan kaliya fiirinayaa cilladda Kdenlive. Waa la i cusboonaysiiyay oo aan ku bilaabo, waxaa igu adkaatay in aan la qabsado fiidiyowga oo si otomaatig ah loogu qaybiyo maqalka, laakiin waxa ugu xun ayaa ah in Kdenlive-keyga uu ku fariisanayo dhexda. Waxaan raadinayaa waddo aan ugu laabto qaabkii hore.
Jawab Daniel Hernandez
Pop! _OS 19.04: cusboonaysiinta cusub ee Nidaamka 76 distro